Ukuba ukholelwa kwiingelosi ezilondolozayo , mhlawumbi uyazibuza ukuba zeziphi izabelo zikaThixo ezi zizalisekile. Abantu kulo lonke imbali ebhaliweyo baye baveza iingcamango ezinomdla malunga nokuba yiziphi iingelosi ezilondolozayo kwaye ziziphi iintlobo zemisebenzi abazenzayo.
Iingelosi ze-Guardian zibukele abantu ngexesha lobomi babo bonke emhlabeni, iintlobo ezininzi zonqulo zithi.
Ifilosofi yakudala yaseGrike yathi imimoya yokugcina yabelwa umntu ngamnye ngobomi, kwaye kunjalo noZoroastrianism. Ukukholelwa ekulondolozeni iingelosi ezibetyala uThixo ngokunyamekela abantu kubalulekile kwinxalenye yobuYuda , ubuKristu kunye ne- Islam .
Njengoko igama labo lithetha ukuba, iingelosi ezilondoloziyo zidla ngokubonakala zisebenza ekulondolozeni abantu besengozini. Abantu baseMesophotamiya bamandulo babheka kwizinto ezidalwa ngumoya obizwa ngokuthi i-shedu kunye ne-lamassu ukubanceda ekukhuseleni ebubini. KwiMateyu 18:10 yeBhayibhile, uYesu Kristu uthi abantwana banamalondolozi ezikhusela iingelosi. I-Mystic kunye nombhali uAmosi Komensky, owayephila ngekhulu le-17, wabhala ukuba uThixo unikela iingelosi ezilondolozayo ukuze zikhusele abantwana "kuzo zonke iingozi neengongqo, imikhosi, izibetho, izibande kunye nezilingo." Kodwa abantu abadala bafumana inzuzo yokukhusela iingelosi , nanjalo, itsho iNcwadi kaEnoki, equkwa kwiicatshulwa ezingcwele zeCawa yeTopiya Orthodox Tewahedo.
U-Enoke 100: 5 uthi uThixo uya kubeka "ingqalelo yezithunywa ezingcwele phezu kwazo zonke iilungisa." IQuran ithi kuArad 13:11: "Ngomntu ngamnye, kukho iingelosi phambi kwakhe nangemva yena, umlondoloze ngomyalelo ka-Allah. "
Ingelosi yakho yokugcina ingathandaza rhoqo kuwe, icela uThixo ukuba akuncede nangona ungaqondi ukuba ingelosi iyancenga emthandazweni egameni lakho.
Ikatekthi yeCawa yamaKatolika ithi ngeengelosi ezilondolozayo: "Ukususela ebusheni kuya ekufeni, ubomi buntu bujikelezwe ngokunyamekela nokunyamezela." AmaBuddha akholelwa ukuba izinto zeengelosi ezibizwa ngokuthi i-bodhisattvas ezibukele abantu, ziphulaphule imithandazo yabantu kwaye zijoyine iingcinga abantu bathandazelayo.
Iingelosi ze-Guardian nazo zinokukhokela indlela yakho ebomini. Kwi-Eksodus 32:34 yeTora , uThixo uxelela uMoses njengoko uMoses ulungiselela ukukhokela abantu baseHebhere endaweni entsha: "isithunywa sam siya kuhamba phambi kwakho." INdumiso 91:11 yeBhayibhile ithi ngeengelosi: "Kuba [ UThixo uya kuyala iingelosi zakhe malunga nawe ukuba zikulondoloze kuzo zonke iindlela zakho. "Imisebenzi yamagama ebhaliweyo ngamanye amaxesha uye wachaza ingcamango yezithunywa ezithembekileyo nezingekhoyo ezinikezela izikhokelo ezilungileyo nezimbi, ngokulandelanayo. Umzekelo, iqela elidumileyo le-16 lemidlalo I-Tragical History of Doctor Faustus ibonise isithunywa esihle nesithunywa esibi, esinika iingcebiso eziphikisanayo.
Abantu beenkolelo ezininzi bakholelwa ukuba iingelosi zigcina zonke izinto abantu bacinga, zithi, kwaye zenzayo kwixesha labo lobomi kwaye zidlule ulwazi malunga neengelosi eziphezulu (njengamagunya) ukuba zibandakanye kwiirekhodi ezisemthethweni zendalo. AmaSulumane kunye neSikhism zombini bathi wonke umntu unengelosi ezimbini zokugcina ngexesha lokuphila kwakhe emhlabeni, kwaye ezo zithunywa zezulu zirekhode zonke izenzo ezilungileyo nezimbi ezenziwa ngumntu.
Ziziphi Iingelosi Ezenziwe Ngayo?
Funda ngeNgelosi Yokufa
Iingelosi ze-Guardian zinyamekela njani abantwana?
Iintlobo zeelosi kwiYuda
Iingelosi zeNtloko: Iingelosi eziphezulu zikaThixo
Umfanekiso weeNkcukacha zeNdlela zoTywala kunye namaSombane
Imbali yeCaer Spray Cans
Biography kaBrian Cox
Ukuphakamisa ukondla kokudlala iVolleyball
Izakhono zokuzibamba ngokuzikhusela zigcina iiMpilo kwiNqabunga e-Snow-Covered
Ubukhosi basePheresiya base-Iran yaseMandulo
Imbali yoLwimi lwaseNtaliyane
16 Imibuzo Ebuzwa Ngokuqhelekileyo ngabalingisi bePraint